केपी र सिपी मिल्दै ? | जनदिशा
केपी र सिपी मिल्दै ?
काठमाडौँ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमका विरुद्ध प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वको नेकपाले बुधबार आयोजना गरेको विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले अनौठो व्यवहार देखाए।
‘ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ भनेर ब्यानरमै लेखिएको थियो। तर वक्ताका रुपमा निम्त्याइएका मैनालीले भने विषयभन्दा निकै पर गएर अनौठो अभियाक्ति दिए। आफ्नो भाषणको पूरै अवधि नेकपाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको आलोचनामा खर्चेका मैनालीले तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारीमाथि समेत तिखो आलोचना गरे।
तत्कालीन माले गठनदेखिका प्रसंगहरु निकाल्दै उनले मदन र नेपाललाई अवशरवादी नेताको आरोपसमेत लगाए। उनले आफूलाई घेरावन्दीमा पारेर महासचिव पदबाट निस्कन बाध्य पारेको पनि बताए। फ्लोरमा रहेका सहभागीहरुले विषयवस्तुमा केन्द्रीत हुन् आग्रह गरेपनि उनले कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा जसरी आफ्ना कुरा राखिरहे।
मैनालीले ओलीको कदमको विरोध गरेजस्तो गरेर समर्थन गरे। संसद विघटन गर्ने ओलीको कदम गलत भए पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको बताए। मैनालीले संविधान निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार संकुचित गरिनु गलत भएको भन्दै अप्रत्यक्ष ढंगले ओलीको समर्थन गरे।
मैनालीले ओलीको कदमको अप्रत्यक्ष समर्थन गरिरहँदा हलमा उपस्थित विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताहरुले भने सिपी र केपीबीच एकताको सम्भावना बढेको आशंका गरेका थिए। यसअघि ओलीले मैनालीलाई आफ्नो समूहमा भित्र्याउन सह-अध्यक्षको प्रस्ताव गरेको समाचार बाहिरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेकपामा निम्तिएको विभाजनले अन्य पार्टीहरुमा समेत ध्रुवीकरण ल्याउनसक्ने चर्चा भैरहेका बेला मैनालीले माधव नेपालको आलोचना र ओलीको समर्थन गर्नुले सिपी र केपीबीचको एकताको डोरी कसिसकेको विश्लेषण हुन् थालेको छ।
Previous Previous post: संसदीय व्यवस्था मात्र लोकतन्त्र होइन :डा भट्टराई
Next Next post: प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग